Interview: The Occupiers Band | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Short Pipe
ထို ၂ ပုဒ် →
EM: The Occupiers အဖွဲ့ဝင် ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းထားပါသလဲရှင်၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီရဲ့ Position လေးသိပါ ရစေရှင်။
Guitars: Lian Lain
Guitars and Vocals: Kim
Keys: Sang Pu
Bass: Joe Joe
EM: The Occupiers ဆိုတဲ့ Occupiers လေးတွေဖြစ်လာဖို့ အဓိက တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း အရင်းလေးကို သိခွင့်ရနိုင်မလားရှင်။
TO: အဓိကတော့ သမားရိုးကျမဟုတ် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုနဲ့ ဂီတကိုအလှဆင်ချင်တဲ့ လူသား ၅ ဦး ဆုံတွေ့မိခြင်းပါ။
EM: The Occupiers Band ရဲ့ အဓိကထား တီးခတ်တဲ့ ဂီတအမျိုးအစားတွေကရော …။
TO: Modern Rock, Alternative and Indie Rock
EM: The Occupiers က ရေးစပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်တွေရော ရှိပါသလား။ ရှိရင် The Occupiers အနေနဲ့ အဲဒီ သီချင်းတွေကို အခွေထုတ်ဖို အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
TO: ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား၊ The Occupiers Band က Original Materials နဲ့ ရပ်တည်တဲ့ Band ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းများရှိပါတယ်။ စီးရီးထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ Website (www.myspace.com/occupiers & www.theoccupiers.co.uk) မှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
EM: The Occupiers အ နေနဲ့ ကိုယ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာနဲ့ တီးဝိုင်း အပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
TO: ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ (ဥပမာ သီချင်းတပုဒ်) ကိုပြန်နားထောင်တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ခံစားမှုပီတိက ဘာနဲ့မှ တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး။ တီးဝိုင်းသားအချင်းချင်းလည်း တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး လေးစားမှု၊ ပိုပြီးနားလည်မှု ရှိလာတယ်။
EM: အခု London မှာ ကျင်းပမယ့် Temptation3နာဂစ် ရန်ပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ The Occupiers အနေနဲ့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေနဲ့ တွဲဖက်ဖျော်ဖြေမယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်၊ အခုလိုဖျော်ဖြေတာဟာ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေမူပါလားရှင်။
EM: အခုလို နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တွေနဲ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ အတွက် ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲရှင်။
TO: It’saprivilege to perform together with such artists for us. We are proud of it.
EM: အခုလို ဖျော်ဖြေပွဲမျိုးတွေ အနေနဲ့ နောက်ထပ်တွေ လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာရင် ဆက်လက် ဖျော်ဖြေဖို အစီအစဉ် ရှိပါသလားရှင်။
TO: ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ ကျနော်တို့ရဲ့အနုပညာနဲ့ ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်များကို ဖျော်ဖြေမယ့်ပွဲတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး တင်ဆက်သွားမှာပါ။
EM: အလုပ်လုပ်ရင် အကောင်းနဲ့ အဆိုးကတော့ တွဲနေတတ်တာမို့ အဆိုးကြုံလာတဲ့ အခါမျိုးရော ရှိပါသလား။ အဲဒီ အခါ The Occupiers က ဘယ်လို Manage လုပ် ပါ သ လဲ ရှင်။
TO: အကောင်းနဲ့ အဆိုးကတော့ တွဲနေတတ်တာ လောကဓမ္မတာပါ။ အမြဲတမ်း Perfect ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူး။ ကြုံလာမဲ့ အခက်အခဲများကို ရရှိထားတဲ့ အတွေ့အကြုံများနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးနားလည်မှုက အရေးကြီးဆုံးပါ။
EM: စာဖတ်သူများကို The Occupiers အနေနဲ့ ဘာများ အမှာစကားပြောချင်ပါသေးလဲရှင်။
TO: အားပေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အကြံပေးပါ။ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ www.theoccupiers.co.uk & www.myspace.com/occupiers မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ info@theoccupiers.co.uk သို့လည်း ဝေဖန်အကြံ ပြုလွှာများ ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်ဗျ။
အခုလို ပရိတ်သတ်ကိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် Existence Media Group ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
One response to “Interview: The Occupiers Band”
Thanks u Mum သီချင်းကိုဆိုထားတဲ့ အဆိုတော်ကို သိချင်ပါတယ်ရှင်